विजय लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म कमायो करिब १२ करोड नाफा - Aarthiknews
विजय लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म कमायो करिब १२ करोड नाफा
काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ११ करोड ८४ लाख ५९ हजार खुद नाफा गरेको छ । मंगलवार सार्वजनिक कम्पनीको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीले १०३ दशमलव ७२ प्रतिशत बढी खुद नाफा गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सो अवधिसम्म कम्पनीले रू. ५ करोड ८१ लाख ४७ हजार मात्र खुद नाफा गरेको थियो ।
गत वर्ष कम्पनीले रू. २ करोड ९१ लाख ७७ हजार खराब कर्जा संकलन गरेकाले पनि नाफामा उल्लेख्य बृद्धि देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले यस अवधिसम्म रू. २६ लाख ५० हजार मात्र खराब कर्जा संकलन गरेको थियो । खराब कर्जा संकलन बढेसँगै गत वर्ष कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी ७४ दशमलव २५ प्रतिशत बढी रू. ३८ करोड १ लाख १७ हजार भएको छ ।
कुल सञ्चालन आम्दानी ६० प्रतिशत बढी रू. ४५ करोड ११ लाख ३९ हजार गरेको कम्पनीको सञ्चालन नाफा भने अघिल्लो वर्षभन्दा ७९ प्रतिशत बढी रू. १५ करोड ६८ लाख ४२ हजार भएको छ ।
कम्पनीले गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा १६७ दशमलव ६९ प्रतिशत बढी रू. १० करोड २३ लाख ५४ हजार सम्भावित जोखिम शिर्षकमा छुट्याएको छ । १९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २६ करोड ६५ लाख ९७ हजार पुगेको छ भने जगेडा कोष रकम साढे ६२ प्रतिशत बढेर रू. १७ करोड ३३ लाख ८२ हजार कायम भएको छ ।
कम्पनीले अघिल्लो वर्षभन्दा ६ दशमलव ८० प्रतिशत बढी रू. २ अर्ब ९० करोड २३ लाख ७८ हजार कर्जा सापटी लिएको छ भने २३ दशमलव ८२ प्रतिशत बढी रू. ४ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख १५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीले २५ प्रतिशत बढी रू. ९९ करोड ३९ लाख ८ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्ष ३ दशमलव २४ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष १ दशमलव ४२ प्रतिशत विन्दु बढेर ४ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. ४४ दशलव ४३ कायम भएको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १६५ रहेको छ ।